Home » My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၁)
အ​ဟောင်း အကုန်​ဖြုတ်​နိုင်​မှ အဟုတ်​တစ်​ကယ်​ ​ပြောင်းနိုင်​မှာပါ
ရွေးဂေါက်ပွဲ လမ်းဂျောင်းဗေါ် ပုံအောတဲ့ ဒီချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၁၅အလွမ် နိုင်ငံလျေးတိုက်ပွဲကို တာဝန်ခံရပါမည်။ ပီးဂဲ့ဒဲ့ ၃နှစ်တာ အားထုတ်မှုမှာတော့ အားလျဆြာ ဝလုံးမရှိ။ အခြေအနေ လုံးဝမကောင်းဘူး…..။ အမေစု အမေစုနဲ့ ဘေးကင်းလျံကွာ နိုင်ငံရေးလှုပ်လိုသူ သပ်ချောင်မြှား၊ ပြင်ညာရှင် စိုသူမြှား၊ ခါတော်မှီ တပ်ကျွလှုပ်လျှားသူမြှား အယေးကြုံလာယင် (လာလှည်းလာတော့မှာပါ) အမေစုကို ပစ်မသွားဘူးလို့ ယုန်ကျီးပါဒယ်။
ဇီကလေး – အရီး လဲ ဒါကို စိတ်တိုတာဘဲ။ တစ်ချို့ က နိုင်ငံရေးစကား ပြောတာ ကိုယ့် အတ္တ အတွက် ပြောနေတာ ဖြစ်နေပြီ။
ဒါထက် နီ သာဆို လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် နေရာ မှာ နေမလား။ အဖြေ တော့ ရှိတယ်ဟုတ်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ.. တပ်က.. ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်လက်ခံမယ်… အာဏာမသိမ်း..
Larry Jagan ရဲ့ အပြော နဲ့ မှန်းချက် ကတော့ NLD မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုနေတာ။
ငိုးမ အဆိုးဓမြလို့ အီနေလျှာက ယဲဝမ့်စွာ ပေါသယ်…
သင်ပုန်းချေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့ကပွဲမှာ ဒေါ်စုက အတိအလင်းပြောသွားပါပြီ..
သူတို့ သိပါတယ်။ မြင်ပါတယ်။
အဲ့ထက် သာတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့…လုပ်ဆောင်ချက်တွေ… အမေစု မလုပ်နိုင်ဘူးလို့များ ထင်နေသလားမသိ….
အမေစုသာ အစိုးရဖြစ်လျှင်…ဆိုပြီး…ကြောက်လန့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့… အမေစုကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းပဲ… အမေစု ဘာလဲ…ဘယ်လဲ…ဆိုတာကို သေချာ ကြည့် မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါလို့…ပြောချင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းစဉ်မှာ ဒီလိုသတ္တိရှိ ၊ အမြော်အမြင်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူလိုအပ်ပါတယ်။ (ဒီစိတ်ကူးယဉ်လေးသဘောကျခဲ့ရင် ဖြူးဒေသခံရဲ့မဲကို ဒီလူကြီးကိုပေးဖို့လော်ဘီလုပ်ပေးပါ )